Shell Wax: Shebekad casri ah oo casri ah oo dul saaran GNOME Shell | Laga soo bilaabo Linux
Waxyaabaha Shell: Qalabka casriga casriga ah ee dusha sare ee 'GNOME Shell'
Kaliya maaha Deegaanka Desktop (DE) y Maareeyayaasha Daaqadda (WM) Waxaan "ku noolahay" (ku raaxeysaneynaa) kuwa ku jecel shakhsiyadda iyo hagaajinta Isdhexgalka Isticmaalaha Sawirka (GUI) Nidaamyada Howlgalka oo bilaash ah oo furan, sida GNU / Linux. Tan iyo, marar badan waxaan haysanaa ikhtiyaarro sida mawduucyo (mawduucyo) ama maqaar (maqaar) leedahay ama kuwa kale, ama ku dar (plugins) ama kordhin taas oo noo oggolaaneysa inaan waxyar ama si xaddidan u beddelno muuqaalka muuqaalka ah ee Linux-keena.
Sida kiiska muddo kordhinta loo yaqaan Shell Qalabka, ayaa laga heli karaa GNOME Shell, kaasoo awood u leh inuu bixiyo a interface desktop casri ah oo loogu talagalay Linux.
Shell Qalabka waa horumar dhawaanahan, tan iyo, sida ay sheegtay goobta rasmiga ah ee GitHub waxay soo sheegaysaa sii-deynta ugu horreysa ee la heli karo, iyadoo la adeegsanayo magaca 1 version, taariikhaysan 10 Maarso ee 2020, iyo sii-deyntiisii ​​ugu dambeysay ee la heli karo, iyadoo la adeegsanayo magaca 7 version, taariikhaysan 15 ee Agoosto ee 2020.
Intaas waxaa sii dheer, horumarinteeda waxay ku saleysan tahay horumar kale oo la yiraahdo Waxyaabo cabsi leh. Labaduba waa 2 oo ay abuureen oo dayactireen isticmaalaha loo yaqaan PapyElGringo.
1 Waxyaabaha Shell: Waa fidin weyn oo loogu talagalay GNOME Shell
1.1 Waa maxay Shell Material?
1.2 Waa maxay sheyga Shell?
1.2.1 Naqshad cusub oo qaabeed
1.2.2 Muuqaal garaafid ah oo dib loo cusbooneysiiyay
1.2.3 Mashiinka maaraynta daaqada oo kale ah
1.2.4 Waxyaabaha kale ee muhiimka ah
Waxyaabaha Shell: Waa fidin weyn oo loogu talagalay GNOME Shell
Waa maxay Shell Material?
Isaga oo daliishanaya degel rasmi ah internetka, waxaa lagu sifeeyaa:
"Muuqaal casri ah oo loo yaqaan 'desktop desktop' oo loo yaqaan 'Linux', oo loo xirxiray sidii loogu kordhin lahaa GNOME Shell. Hagaajinta khibradaada isticmaale oo ka takhalus nidaamka fowdada shaqada ee miisaska dhaqameed. Loogu talagalay in lagu fududeeyo socodka iyo yareynta baahida loo qabo in la maareeyo daaqadaha si loo hagaajiyo wax soo saarka. Waxaa loogu talagalay inay noqoto mid 100% la saadaalin karo isla markaana keeni doonta waxtarka aaladaha ay u hamuun qabaan xirfadlayaashu adduunka.".
Waa maxay sheyga Shell?
Markaad degayso Qalabka Shell ee ku yaal GNOME Shell isticmaaleyaasha ayaa ku raaxeysan kara waxyaabaha soo socda muuqaalada iyo functionalities ku daray:
Naqshad cusub oo qaabeed
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhex marto deegaanka garaafyada adoo wax badan qabanaya saaxiibtinimo oo la saadaalin karo. Tan iyo markii ay, waxaa ka mid ah a goob shaqo oo aad ufiican inaad ka koobnaato codsiyo badan hal mar oo aad si fudud ugu kala bedesho.
Tani waxay ku mahadsan tahay xaqiiqda ah in mid kasta goobta shaqada waxaa loo soo bandhigayaa sida isku xigta oo leh dhowr codsi. Marka codsi cusubna la furo, waxaa si otomaatig ah loo dhigaa dhamaadka goobta shaqada ee hadda, halka markii goob shaqo cusub lagu daro, si toos ah ayaa hoos loogu daraa hoosta, iyadoo soo bandhigaysa wax kasta oo lagu fuliyay habka ugu wanaagsan.
Astaantani waxay ka dhigeysaa mid fudud, la saadaalin karo, oo wax ku ool ah iyada oo si toos ah loo kala soocayo daaqadaha. isaga moodeelka qaabka shabakadda waxay bixiyaan a hago dareen leh taasina waxay sahleysaa isdhexgalka barnaamijyada. Intaa waxaa dheer, isticmaalka tuubada kumbuyuutarka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kor iyo hoos u raacdo inta udhaxeysa goobaha shaqada, oo aad bidix ilaa midig udhaxeyso inta udhaxeysa daaqadaha si fudud oo dhaqso ah.
Muuqaal garaafid ah oo dib loo cusbooneysiiyay
Waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo muuqaalka halka wax walba yaalliin, iyo sidoo kale in loo oggolaado sahaminta Deegaanka Desktop (DE), labadaba jiir iyo shaashad taabasho. Marka laga hadlayo qaabkeeda, waxay u qaybsan tahay laba qaybood ama looxyo.
El guddi bidix wuxuu maareeyaa wax kasta oo nidaamka la xiriira (meelaha shaqada furan, xaaladda nidaamka hadda jira, ogeysiisyada), halka kan gudida saxda ah waxay maamushaa goobta shaqada ee la adeegsanaayo (daaqadaha safka goobta shaqada, badalka qaabka, iyo daaqadaha laftooda). Dhexdeeda, laba qaybood oo muhiim ah ayaa taagan, kuwaas oo ah nidaamka nidaamka (bidix) iyo kan guddiga goobta shaqada (kor).
Marka laga hadlayo naqshadeynta muuqaalkeeda, waxay raacdaa tilmaamaha Style Waxyaabaha Desing, kaas oo bixiya aasaas adag oo u oggolaanaya bixinta a interface bilicsanaanta iyo heer sare ah la heli karo. Intaa waxaa dheer, waxaa ku jira saddex mowduuc oo la heli karo kuwaas oo ah: Gudcur, Iftiin iyo Aasaasi. Midda dambe ayaa noo oggolaaneysa inaan adeegsanno midabka aan dooranno. Waxay sidoo kale bixisaa suurtagalnimada in lagu kharibo interface-ka, kuwa isticmaala kuwa doonaya muuqaal dhalaalaya oo dhalaalaya.
Mashiinka maaraynta daaqada oo kale ah
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku abaabusho daaqadahaaga qaab la saadaalin karo oo aysan is dulsaarin, taas oo meesha ka saareysa jahwareerka maamulka daaqada. Sidaas darteed, Shell Qalabka ogolaanaya siyaabo kala duwan si ay u muujiyaan daaqadaha qaabka dusha sare. Kuwanuna waa kuwan soo socda:
La waafajiyey: Daaqad keliya oo haysa dhammaan goobta shaqada.
Qaybi: Laba daaqadood, mid baa kan kale ku xiga, oo midkiiba fuulayo goobta shaqada.
Safka: Dhammaan daaqadaha waxaa loo soo bandhigaa sida tiirar (waxtar u leh kormeeraha ballaaran ee ballaaran)
Dhexda: Daaqad bidixda ka xigta iyo daaqado kale oo midig laga soo dhejiyay.
On shabakadda: Dhammaan daaqadaha waxaa loo soo bandhigaa sida shabakad.
Waxyaabaha kale ee muhiimka ah
Waxyaabaha Shell ayaa sidoo kale bixiya joogto ah, taasi waa, awoodda lagu xasuusto iyo / ama u habeeyo daaqadaha furitaanka daaqadaha. Iyo ciyaar heer sare ah tuubada kumbuyuutarka in si fudud loo maareeyo waxa lagama maarmaanka ah, iyadoo laga fogaanayo isticmaalka jiirka.
Si aad waxbadan uga barato Shell Qalabka oo aad si buuxda u fahamto sida wax kasta oo kor lagu sharaxay ay u egyihiin, waad booqan kartaa waxyaabaha soo socda xiriirka rasmiga ah en Extensions GNOME, oo ku arag ficil adoo adeegsanaya fiidiyowyadaada rasmiga ah ee YouTube, ka hor intaadan isku dayin inaad maamusho habka rakibaadda.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan fidinta cajiibka ah ee loo yaqaan 'GNOME Shell' «Material Desing», kaas oo bixiya a interface desktop casri ah loogu talagalay Linux; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Waxyaabaha Shell: Qalabka casriga casriga ah ee dusha sare ee 'GNOME Shell'
Dextre 1480 dijo
Waad salaaman tahay, waan jeclahay kordhintaan iyo waxaan u hambalyeynayaa abuureheeda, laakiin ra'yigeygu wuxuu tagayaa boggan blog.desdelinux.net mar kasta oo aad booqato boggan waxay i weydiineysaa inaan aqbalo cookies-ka isla markaana la aqbalo, xayeysiinta ay runta ku jirto inta badan way ka boodi shaashadda taleefankayga gacanta oo ka dhigaysa akhrinta maqaalka mid aad u dhib badan, fadlan sxb, wax yar ka sii cabir xayeysiinta, dhowr jeer ayaan joojiyay akhriska maqaallada aad daabacdo sababtaan darteed laakiin hadda oo aan waqti haysto Waxaan faallo ka bixinayaa faahfaahintaan, waxaan rajeynayaa inaad fahantay, salaan
Maareeyaha Muuqaalka: Maxay yihiin Maamulayaasha Soo Galitaanka Linux?
Firefox 82 waxay la timid horumarin loogu talagalay fiidiyowga, dardargelinta iyo inbadan